Orinasa mpivarotra orinasa? FIDULINK mpahay lalàna
TANTARA FARANY MBOLA MORA KOKOA
TSIA ZAVATRA VARANA
Nandritra ny 10 taona mahery dia nanoro hevitra sy niaraka tamin'ny mpanjifany tamin'ny dingana sy ny fahazoana ny Fivarotana Ara-bola ara-bola i Fidulink, mba hahafahan'izy ireo manokatra ny fivarotana ara-bola amin'ny orinasam-pitaterana. Fanohanana feno ny lalampanorenana rakitra hahazoana fahazoan-dàlana ara-barotra ara-bola nefa koa ao amin'ny lalàm-panorenan'ny orinasa sy ny any amin'ny sehatra mihoatra ny 56.
Serivisy fanamboarana sy fihodinana vita amin'ny vatosoa hanolotra serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Ekipa manam-pahaizana manokana eo amin’ny sehatry ny varotra ara-bola eto amin’izao tontolo izao. Miaraka amin'ny traikefa ananantsika sy ny fitaovana ary ny vahaolana ahazoanao ny fahazoan-dàlana ara-bola ara-bola dia ho dingana tsotra ary tsy dian-tongotra intsony amin'ny mpiady.
Miaraka amin'ny zavatra niainana toa anay, tsy afaka milaza aminao fotsiny izahay fa ny fahazoana ny fahazoan-dàlana ara-bola dia tsotra.
FANGALOHANA NY TENAN-TRANO FINOANA
FIDULINK dia manome ny mpanjifany fanampiana feno amin'ny fampiharana azy ireo sy ny lalàm-panoratana ny fangatahana lisansa ara-barotra ara-bola. ny mpiasa FIDULINK mahatsapa ny lalàm-panorenana ny antontan-taratasinao amin'ny fahazoan-dàlana ara-barotra ara-bola.
Raha te hahazo vaovao misimisy momba ny fangatahana fahazoan-dàlana ara-bola dia manantona fotsiny amin'ny mpanolotsaina FIDULINK.
HITOVY NY FIVAROTANA VOA ATAO ANAO?
FIVORIANA TRANO FINANCIAL
Te-hanomboka orinasa varotra ara-bola ve ianao? Mahazoa hetsika ara-barotra.
Ny famoronana ny orinasanao ara-bola ao anatin'ny andro vitsivitsy dia azo atao miaraka amin'ny vahaolana amin'ny FIDULINK manangana ny orinasanao ara-bola, mametraka ny rakitra fangatahana fahazoan-dàlana ary mangataka fahazoan-dàlana ara-bola, fampidirana banky, fametrahana fomba fandoavam-bola, fampiantranoana ary famoronana ny tranokalanao.